Ogaden News Agency (ONA) – Gud.Ku-xigeenka JWXO Dr. Maxamad Ismaaciil oo Jaaliyadda Swiss Kala Qaybgalay Shirkoodii
Gud.Ku-xigeenka JWXO Dr. Maxamad Ismaaciil oo Jaaliyadda Swiss Kala Qaybgalay Shirkoodii
Waxaa maalintii Sabtida ahayd shir balaadhan lagu qabtay magaalada Zurich, caasimadda ganacsiga dalka Switzerland, shirkaasoo ay ka soo qayb galeen xubnaha Jaaliyadda S.Ogadenya. Waxaa kaloo kasoo qaybgalay shirka xubna ka socday jaaliyyada Somaliyeed ee taageersan halganka walaahooda Somalida Ogadenya ay ku doonayaan inay kaga xoroobaan gumaysiga Itobiya.
Waxaa kaloo marti ku ahaa shirka oo si fiican loogu soo dhaweeyay Gud. Ku-xigeenka Jabhda Wadaniga Xoraynta Ogadenia (ONLF) oo kormeer howleed ku marayay jaaliyadaha qaarada Yurub.
Gudoomiye Ku-xigeenka mudane Maxamad Ismaaciil ayaa warbixin waafi ah siiyay dadkii fadhiyay shirka xaaladda uu maryo halganka ka socda Ogadenya. Wuxuu kaloo Dr. Ismaaciil ka xogwaramay guuldarada haysata Itobiya iyo burburka kusoo fooleh.
Waxa kale ol hadal qiima badan ka jeediyay shirka gudoomiyaha Somali Swiss Diaspora mudane Bshiir Goobdoon oo soo dhaweyn iyo xogwaran ka jeediyay. Waxaa kaloo hadal dadkii shirka fadhiyay taabatay ka jeediyay mudane Badhiir Cabdiqaadir Bootan oo hadalo wadaniyad iyo hoga tusaalayn badan ka jeediyay madasha, tusayna dadkii fadhiyay shirka gumaysiga umada Somaliyeed haysta iyo tabaha uu adeegsanayo.
Shirka ayaa guul kusoo gabagaboobay.